Tweet လုပ်ရန်အတွက် LinkedIn အတွက်သိကောင်းစရာများ ၃၃ ခုဒီမှာ! | Martech Zone
Tweet လုပ်ရန်အတွက် LinkedIn အတွက်သိကောင်းစရာများ ၃၃ ခုဒီမှာ!
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2014 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
ငါ LinkedIn ကနေ update ကိုဖတ်ရှုခြင်း, LinkedIn ကိုအပေါ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူချိတ်ဆက်, LinkedIn ကိုအတွက်အုပ်စုတစ်စုတွင်ပါဝင်, ဒါမှမဟုတ် LinkedIn တို့ပေါ်မှာငါတို့အကြောင်းအရာနှင့်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်ငါရက်ပေါင်းများစွာမလွန်။ LinkedIn ဟာကျွန်တော့်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုပါ။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းက Premium Account ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော် ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ ၀ က်ဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်မှလူမှုမီဒီယာနှင့် LinkedIn အသုံးပြုသူများထံမှအကြံဥာဏ်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပြီးဤမျှကြီးမားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောရှေးရှေးအတိုင်းလိုက်နာပါ။
တင်ဆက်သူများနှင့်အများပြည်သူဟောပြောသူများသည်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ပြီးစကားပြောဆိုမှုအခွင့်အလမ်းများရရှိရန်နှင့်ပရိသတ်နှင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော LinkedIn လမ်းညွှန် ၃၃ ခုသည်အက္ခရာ ၁၄၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောနည်းဖြင့်အကျဉ်းချုံးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကြံပေးချက်များမှမြန်ဆန်စေရန်နှင့် LinkedIn အသိုင်းအဝိုင်းတွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသည့်အလုပ်သို့သွားရန်လွယ်ကူစေသည်။ Leslie Belknap
မင်းတို့ရိုးရိုးလေးလုပ်နိုင်ဖို့ဒီ tweets တွေထည့်ပြီးပြီ ကလစ် သူတို့ကိုအပေါ် tweet ရန်သူတို့ကိုအပေါ်!
Tweet - တင်ဆက်မှုမပြုမီ၊ သင့် LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုမွမ်းမံပါ။ တက်ရောက်သူ၏သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရအကဲဖြတ်ရန်ကပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ @ Ethos3
Tweet ။ ယေဘူယျလင့်ခ်ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါ။ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ profile များ။ @EntMagazine
Tweet ။ ။ အလုပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီ၌သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအခန်းတိုင်းအတွက် entries များကိုဖန်တီးပါ။ ရက်ထပ်နေတာအဆင်ပြေပါတယ် @Forbes
Tweet - မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုဖြစ်လာတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုဖန်တီးဖို့သင့်ရဲ့ကွန်ရက်နဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေမျှပါ။ @ReidHoffman
Tweet - LinkedIn ရဲ့ရှည်လျားတဲ့စာမူတွေအတွက်စံပြအရှည်ကစကားလုံး ၅၀၀ ကနေ ၁,၂၀၀ ဖြစ်တယ်။ သင့်ပရိသတ်အတွက်အပ်ချုပ်အရှည်။ @SmallBizTrends
Tweet:“ ဒီလူကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ” ခြေလှမ်းကိုကျော်လိုက်ပါ။ Profiles အစား search results မှ“ Connect” ကိုနှိပ်ပါ။ @SylvanLane
Tweet: အခြားသုံးစွဲသူ (သို့) ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသင်၏ LinkedIn status updates ကိုမြင်ချင်ပါသလား။ သင်တင်သောအခါ @mentions ကိုသုံးပါ။ @HubSpot
Tweet: Wallflower မနေပါနဲ့။ အကယ်လို့သင်ပူးပေါင်းပြီးအုပ်စုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ရှုရန် ၅ ဆပိုများလိမ့်မယ်။ @LinkedIn
Tweet ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုပါနဲ့။ ရက်ရောပါ၊ စစ်မှန်ပြီးအခြားသူကိုအာရုံစိုက်ပါ။ @EmmieMartin
Tweet: LinkedIn မှာအလုပ်သစ်တစ်ခုရှာနေသလား။ သင့်ရဲ့သူဌေးကိုအသိမပေးပါနဲ့; သင်၏လှုပ်ရှားမှုထုတ်လွှင့်ချက်များကိုပိတ်ပါ။ @CareerOutcomes
Tweet ။ သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုပုံမှန်မွမ်းမံတဲ့ LinkedIn အသုံးပြုသူတွေဟာစုဆောင်းသူတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့ရွယ်တူတွေထက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပိုရတယ်။ @RimDey
Tweet: ကိုယ်တိုင်ဆင်ဆာလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်၎င်းကိုမပြောလျှင် LinkedIn အုပ်စုသို့မဟုတ် post တွင်မပြောပါနှင့်။ @TechRepublic
Tweet: LinkedIn တွင်တက်ကြွရန်အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ပါ။ @ABAesq
Tweet: Evernote နဲ့ LinkedIn တို့ပေါင်းစည်းထားတယ်။ စီးပွားရေးကတ်များ၊ LinkedIn အချက်အလက်နှင့်ကွန်ယက်မှတ်စုများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းပါ။ @Evernote
Tweet: သင့်ရဲ့ LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုအဖြစ်သုံးပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်သို့သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းဗီဒီယိုတိုတစ်ခုထည့်ပါ။ @Salesforce
Tweet - LinkedIn အုပ်စုများအတွက်တန်ဖိုးထည့်ပါ - အဖွဲ့ ၀ င်များကိုစိတ် ၀ င်စားစေမည့်အမြင်အာရုံတင်ပြချက်များကိုမျှဝေပါ။ @JayBaer
Tweet - ရုပ်ပုံများပါတဲ့ Profiles တွေဟာ 14x ပိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ကြားနေနောက်ခံရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံတစ်ပုံကိုသုံးပါ။ @LinkedIn
Tweet - ဖန်တီးမှုနဲ့လှုံ့ဆော်မှုစတဲ့ပရိုဖိုင်းစကားလုံးဝေါဟာရတွေကိုရှောင်ပါ။ နာမဝိသေသနလျှော့ချပါ။ ကြိယာများကိုအလေးပေးဖော်ပြပါ။ @BusinessInsider
Tweet - အလိုအလျောက်ဖိတ်ကြားချက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမသုံးပါနှင့် -“ မင်းကို LinkedIn မှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ထဲထည့်ချင်ပါတယ်။ @DailyMuse
Tweet - "LinkedIn ကတစ်လကိုပို့စ် ၂၀ ကသင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပရိသတ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ " @Buffer
Tweet ။ LinkedIn မှာတင်မယ့်အကောင်းဆုံးအချိန် - အင်္ဂါနေ့နဲ့ကြာသပတေးနေ့၊ ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၇ နာရီကနေမနက် ၉ နာရီကြားမှာ။ @SocialMediaWeek
Tweet - ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံတွေနဲ့အတူမွမ်းမံချက်ဟာရုပ်ပုံမပါတဲ့ update တွေထက် ၉၈% ပိုမိုသောမှတ်ချက်ပေးမှုနှုန်းရှိသည်။ @LinkedIn
Tweet: LinkedIn ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရိုးရှင်းစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ @Jillianiles
Tweet ။ သက်သေပြပါ။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုပျက်ကွက်မည့်အစားဖန်တီးမှုခေါင်းစဉ်ကိုသုံးပါ။ @MarketingSherpa
Tweet: ရှာဖွေစုဆောင်းသူ၊ သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်းတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုသုံးပါ။ @USnews
Tweet: အောင်မြင်သော LinkedIn ပါဝင်မှုသည်မကြာခဏအဆင်သင့်အသုံးပြုရန်ယူဆောင်နိုင်သောစာရင်းများကိုစာရင်းပုံစံဖြင့်ပေးလေ့ရှိသည်။ @AndreyGidaspov
Tweet: Dan Pink ရဲ့ ဦး ဆောင်မှုကိုလိုက်နာပါ။ သူသည် LinkedIn ၏ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းအတွက်“ TED စပီကာများအတွက်အချက် ၃ ချက်” ကိုတင်ခဲ့သည်။ @DanielPink
Tweet: သင်လေးစားတဲ့သူတွေကိုထောက်ခံပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုထောက်ခံတဲ့အခါကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ။ @JeffBullas
Tweet - LinkedIn မှာလုပ်အားပေးအတွေ့အကြုံစာရင်းပြုစုပါ။ ငှားရမ်းမှုမန်နေဂျာ၏ ၄၂% သည်၎င်းကိုတရားဝင်အလုပ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်တန်ဖိုးထားကြသည်။ @LinkedIn
Tweet -“ LinkedIn အုပ်စုများသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများကိုပေးသည်။ ” @Forbes
Tweet ။ ကုမ္ပဏီရဲ့အခန်းကဏ္fillကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရုန်းကန်နေရသလား။ စုဆောင်းသူငှားရမ်းမည့်အစား LinkedIn ၏စုဆောင်းသူဝန်ဆောင်မှုသို့ဆက်သွယ်ပါ။ @NYtimes
Tweet - မူရင်းအကြောင်းအရာကိုဝေမျှပါ။ LinkedIn ရှိအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုထက်အကြောင်းအရာများကိုယခု ၆ ဆပိုမိုကြည့်ရှုနေသည်။ @JasonMillerCA
Tweet: ပုံရိပ်ယောင်များကိုသုံးပါ။ SlideShare တင်ပြချက်များနှင့် infographics များကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ရှည်လျားသောပုံစံများထဲသို့ထည့်ပါ။ @SMExaminer
Tags: andrey gidaspovကြားခံစီးပွားရေးအတွင်းလူနေပြည်တော်daniel ပန်းရောင်Emmie MartinEthos ၃EvernoteForbeshubspot ဖြစ်သည်Jason Millerဂျေးဗာဂျက်ဖ် Bullasjillian ileslinkedinlinkedin အုပ်စုများlinkedin တင်ပြချက်များlinkedin ပရိုဖိုင်လိပ်စာများအတွက်အကြံပြုချက်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေး SherpaMarketingSherpaNew York TimesReid ဟော့ဖ်မန်းအနားကွပ်ရောင်းသူလူမှုမီဒီယာစစ်ဆေးတဲ့လူမှုမီဒီယာရက်သတ္တပတ်sylvan လမ်းသွား
အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၏3ရှုထောင့်